Umaki: i-skoda logo | Martech Zone
Maka: uphawu lwe-skoda
Umlando Nokuziphendukela Kwemoto kwamaLogo
ULwesithathu, April 29, 2015 ULwesine, April 30, 2015 Douglas Karr
Ukubona okubonakalayo kubaluleke kakhulu kunalokho abantu abaningi abakholelwayo. I-logo ayimeleli nje uphawu, imvamisa inezincazelo eziningi futhi ingalandelela nomlando wenkampani. Izinkampani eziningi ziyamelana nokushintsha i-logo. Kungenzeka ukuthi basebenzise imali eningi ukufaka uphawu lokushicilela, noma bakhathazekile ngezindleko nomzamo odingekayo lapho kwenziwa kabusha igama. Ngiyakholelwa ngokuqinile ekwenzeni ngcono ilogo yakho ukuyigcina yomibili